CIIDAMADA AMNIGA GOBOLKA TOGDHEER IYO TAAGEERAYAASHA KULMIYE EE TOGDHEER OO ISKU DHACAY | Toggaherer's Weblog
BURCO 11 APRIL 2009 THN
Ciidamada Booliska ayaa saaka weeraray xarunta Xisbiga Kulmiye ee magalaada Burco ee gobolka Togdheer, halkaas oo ay shir jaraa’id ku qabteen masuuliyiinta xarunta Kulmiye,
Taageerayaasha iyo masuuliyiinta Xisbiga Kulmiye ee Gobolka Togdheer iyo ciidamda Booliska ayaa gacanta isula tagay waxaana jira dhaawcyo soo gaadhay dad oo ka dhashay qoryaha dabadooda oo ay isticmaalayeen ciidamda boolisku .
Masuuliyiinta xisbiga Kulmiye ayaa ku eedeeyey Xukuumada dhacdadan Xukuumada iyaga oo ku sheegay in looga gol lahaa in la iska horkeeno beelaha wada dega Burco .
Sidoo kale Xogahya xisbiga Kulmiye Mudane Kayse ayaa canbaareeyey Falkan lagula kacay xafiiskooda Burco
Geesta Kale war-saxaafadeeedka ay soo saareen xisbiga Kulmiye kuna saxeexan yahay Gudoomiyaha Gobolka Togdheer ee Xisbga Mudane Sahal Aden Maxamed ayaa u qornaa sidatan:-
1. Xisbiga kulmiye wuxuu diyaar u yahay in uu ilaaliyo qaranimada iyo jiritaan-ka jamhuuriyada somaliland iyo nabad galyada ay ku caanao maaleen umada reer somaliland.
2. Xisbiga Kulmiye wuxuu beeninayaa dacaayadaha raqiiska ah ee ay adeeg sanayaan xukumada iyo xisbiga UDUB oo ay war-baahinta dawlada ka sii daynayaan in uu kulmiye khal khal gelinaayo nabad galyada, waxaau cadaynaynaa in uu kulmiye uga lexo jeclo badan yahay dalka iyo dad-kaba.
3. Waxaanu halkan ku cadaynaynaa hadaanu nahay xisbiga kulmiye in ay xukumadu ay ka wado Gobolada Togdheer nabad gelyo xumo iyadoo marka ay tamar kale wayday ku talo gashay inay iska hor keento beelaha Gobolkan ku wada nool ee walaalaha ah.
4. Waxaanu cadaynaynaa hadaanu nahay xisbiga kulmiye in ay xukumadu soo samaysay calamadii xukumadii hore ee soomaaliya iyada oo ku talo gashay in ay ku masabido xisbiga kulmiye.
5. Hadaanu nahay xisbiga Kulmiye waxaanu halkan ku cadaynaynaa in ay xukumadu colaada ay kula jirto xisbiyada mucaaridka ah si foolxun shaqada looga eryo.
hadaanu nahay xisbiga kulmiye waxaanu baaq u dirayaan dhamaan bulsho weynta Reer somaliland in ay ku fara adeegaan nabad galyadooda iyo qaranimadooda iyada oo ay xukumadu doonayso in ay khal khal galiso qaranimada, iyada oo ay xukumadu doonaysa in ay khal khal geliso nabad galyada, maalin walbana rasaas ku ridaysa masuuliyiinta asxaabta qaranka iyo shacabka reer somaliland oo aan waxba galabsan, ujeedada ay ka leeyihiina ay tahay maadama oo aanay xukumadu iyo xisbiga UDUB aanay haysan rajo kale oo ay kursiga ku sii fadhiyaan oo aan ahay in ay colaad wadanka ka abuuraan.
waxaa kale oo aanu baaq nabad-gelyo u diraynaa beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay agagaarka ceel bardaale, wuxuu xisbiga kulmiye baaq nabad galyo u dirayaa beelaha walaalaha ah ee wada degan Gobolka Togdheer oo hada xukumadu doonayso in ay ka dhex huriso colaad hor leh markay awood kale wayday.
Waxaanu digniin culus u diraynaa hadaanu nahay xisbiga Kulmiye xukumada iyo Xisbiga UDUB inay ka waantoobaan falalka foosha xun ee ay ka dhex wadaan beelaha walaalaha ah ee wada degan somaliland ee nabada ku wada nool
War-saxaafadeedkan waxaa soo saaray Gudiga Fulinte ee Gobolka Togdheer ee xisbiga Kulmiye,
Gudoomiyaha Xisbiga kulmiye ee Gobolka Togdheer
Mudane Sahal Aden Maxamed
XAFIISKA WARQABDKA TOGAHERER HARGEYSA SOMALILAND